रामकृष्ण ताम्रकारसँग रामचन्द्र पौडेलको बोलचाल थिएन - Jhilko
रामकृष्ण ताम्रकारसँग रामचन्द्र पौडेलको बोलचाल थिएन
२४ वैशाख, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसभित्र एकापसमा बोलचाल नगर्ने नेताहरुको सङ्ख्या उल्लेख्य छ । दुई साताअघि दिवंगत पूर्व केन्द्रीय कोषाध्यक्ष रामकृष्ण ताम्राकार र बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलबीच बर्षौदेखि बोलचाल थिएन । केन्द्रीय नेताद्वय अर्जुननरसिंह केसी र डा. रामशरण महतबीच पनि बोलचाल नभएको वर्षौ भइसकेको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँग केन्द्रीय सदस्य बलबहादुर केसी आवश्यक परेको बेलामा मात्रै बोल्छन् । बरिष्ठ नेता पौडेल र हालै दिवंगत पूर्व कोषाध्यक्ष ताम्राकारबीच बोलचाल बन्द हुनुको कारणबारे संक्षिप्त चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
२०४९ सालमा शैलजा आचार्यले राजीनामा दिएपछि कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि स्थानीय विकास मन्त्री रामचन्द्र पौडेलले सम्हाले । २०५० सालमा भारतमा लसुनको मूल्य आकासियो । चीनबाट लसुन आयात गरेर भारतीय बजारमा बिक्री गर्ने प्रबन्ध केही मारवाडी व्यापारीहरुले मिलाए । तर, चिनियाँ कृषि उपज भारतमा बेच्न सहज थिएन । नेपालमै उत्पादन भएको भनेर मन्त्रीले नै प्रमाणित गरिदिनु पथ्र्यो । बयापारीहरु पाँच करोड रुपैयाँको अफर लिएर कृषिमन्त्री पौडेललाई भेट्न गए । तर पौडेल डराए ।
ती ब्यापारी फिर्ता भएको केही घण्टापछि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले फोन गरेर भने, ‘रामचन्द्रजी चुनाव आउनै लागेको छ, खर्चपर्र्च पनि चाहिन्छ, मिलाइदिनु है ?’ पौडेलले हस् भने तर काम गरिदिएनन् । यो कुरा गोबिन्दराज जोशीले थाहा पाए । उनले उद्योग मन्त्रालयले सिफारिस गर्दा पनि हुने सुझाव दिए ।
जोशीको सुझावबमोजिम प्रधानमन्त्री कोइरालाले उद्योगमन्त्री रामकृष्ण ताम्राकारलाई फोन गरे । यसरी पाँच करोड रुपैयाँ चुनाव खर्च लिएर चिनियाँ लसुनलाई नेपाली उत्पादन भनेर ट्याग लगाई भारतमा निर्यात गरियो । उद्योगमन्त्री ताम्राकारले पाँच करोडमध्ये दुई करोड फेला पारे । मन्त्री ताम्रकारले फेला पारेको यो दुई करोडमा रामचन्द्र पौडेलले लोभ देखाए । उनी आफै उद्योगमन्त्री ताम्रकारलाई भेट्न गए र भने, ‘तपाईं आफै पनि ठूलो ब्यापारी हुनुहुन्छ, सक्षम पनि हुनुहुन्छ, मलाई चुनाव खर्च चाहिएको छ, त्यो दुई करोड रुपैयाँ आधा–आधा गरौं ।’
पौडेलको यो प्रस्तावपछि ताम्राकार रिसले आगो भए । लोभी बाहुन, चुतिया बाहुन, पाँच करोड सबै तैँले पाउने अवस्था थियो, त्यतिबेला के हेरेर बसेको थिइस् ? भन्दै ताम्राकार राँकिएपछि मैले पनि तँलाई जानेको छु, भन्दै पौडेल बाहिरिए । त्यसैबेलादेखि उनीहरुबीच बोलचाल बन्द भयो ।
२०५४ सालमा नेपाली कांग्रेसको नवौं महाधिवेशन हुँदै थियो । त्यतिबेला केन्द्रीय सभापति र सात विकास क्षेत्रबाट एक एक जना केन्द्रीय सदस्य मात्रै निर्वाचित हुने व्यवस्था थियो । सुदूर पश्चिमबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पश्चिमाञ्चलबाट तत्कालीन सभामुख पौडेल निर्विरोध निर्वाचित हुने लगभग तय भइसकेको थियो । तर, देउवा निर्विरोध भए, पौडेलविरुद्ध भने ताम्राकारले उम्मेद्वारी दिए ।
ताम्राकारले उम्मेद्वारी मात्रै दिएनन्, सभामुख पदमा आसिन व्यक्ति कुनै पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुन नमिल्ने दलील पेश गर्दै उजुरीसमेत हाले । पौडेलले धन्नधन्न उम्मेद्वारै बन्न नपाउने स्थिति आयो । रोइकराई गरेर चुनाव त जिते तर केन्द्रीय सदस्य पदबाट राजीनामा दिन पार्टीले निर्देशन दियो । पौडेलले राजीनामा नदिएर केन्द्रीय सदस्य पद निलम्बनमा राखेको घोषणा गरे । समयबद्ध साप्ताहिकबाट
नेपाली नर्सलाई बेलायतमा रोजगार पाउने सम्भावना बढ्दो
मूलपानी क्रिकेट मैदानः नयाँ नीति, पुरानै कार्यक्रम
तेस्रो मुुलुकका देशहरूका लागि विज्ञान प्रविधिका विज्ञहरूलाई ग्रामिण क्षेत्रमा पठाउनुपर्ने...
बालुवाटारमा मन्त्रीका परिवारलाई 'डिनर पार्टी'
प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ र पूराना मन्त्री र तिनका परिवारलाई बालुवाटार बोलाइएको...
थप १७ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि, सङ्क्रमित ४४४ पुगे
झापा कचनकवल गाउँपालिका ३, ६ र ८ का दुई जना १८ वर्षका, दुई जना १९ वर्षका र अरु २२,...
चौधरी ग्रुप कर छली र बीमा ठगीमा माहिर
आफै बीमा दाबी गर्ने र आफै बीमा भुक्तानी गर्ने चौधरी समूहकै कारण युनाइटेड इन्सुरेन्स...